Kayaş-Sincan Başkentray Hattı 18.4 Km Uzatılıyor | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီKayaş-Sincan Başkentrayလိုင်းသည် 18.4 Km ကိုတိုးချဲ့သည်
18 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ခရီးသည်ရထား, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
Sincan မြို့တော်ဝန် Murat Ercan ၏ပဏာမခြေလှမ်းဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောBaşkentrayလိုင်းကိုတိုးချဲ့ရန်စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်နေသည်။ Project 17 သည်မတ်လ 2022 ကိုအဆုံးသတ်သည်
Sabah သတင်းစာVuslat Ay ၏သတင်းအရ "ရှင်ကျန်း 1 ။ ဖွဲ့စည်းထားသောစက်မှုဇုန်နှင့် Yenikent လူနေထိုင်ရာsuburရိယာ၊ ဆင်ခြေဖုံးလိုင်း 18.4 ကီလိုမီတာကိုAkçaörenရပ်ကွက်အတွင်းတွင်ထပ်ထည့်မည်။ 31 Mart ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီစီမံကိန်းများအကြောင်းကြေငြာပြီး Ercan သည် 36 ကီလိုမီတာကို Sincan နှင့်Kayaşခရိုင်များအကြားရှိ 18 ကီလိုမီတာလိုင်းတွင်အမှုဆောင်နေသောBaşkentrayလိုင်း၏Akçaörenရပ်ကွက်သို့တိုးချဲ့မည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ Ercan၊ Baskentray လိုင်းစီမံကိန်းအား2၏အခြေခံအုတ်မြစ်ချခြင်းအား3နှစ်အတွက်အဆုံးသတ်စရာမလိုဘဲအခက်အခဲမရှိလျှင်လွန်ခဲ့သည့်လများကစတင်ခဲ့သည်။ Ercan“ Sincan မှAkçaören'eခရီးသည်မျဉ်းကိုသွားမည်။ Akcaörenပြီးနောက်ကုန်တင်ကားသည်Mülkköyüရှိဆိုဒါစက်ရုံသို့သွားလိမ့်မည်” Sincan သည်မြို့ပြခရိုင်များအနက်တစ်ခုနှင့် ၆ ခုမြောက်လူ ဦး ရေအများဆုံး Ankara ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Sincan မှAkçaörenအထိ၊ KöyKöyသို့ Kash နှင့် Sincan အကြားဆောင်ရွက်နေသောBaşkentrayစီမံကိန်းနယ်ပယ်အတွင်းရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများမှတိုးချဲ့လိမ့်မည်။
Sincan မြို့တော်ဝန် Murat Ercan သည်အလုပ်ကိုAugustဂုတ်လတွင်စတင်ခဲ့ပြီးလျှင်မြန်စွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုသူကပြောသည်။ Ercan, Yenikent ၏လူ ဦး ရေထောင်ပေါင်းများစွာ။ သူတို့မှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းချက်တွေရှိတယ်။ Başkentrayစီမံကိန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးအကြီးဆုံးစီမံကိန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှိပြီးသားKayaşနှင့် Sincan အကြားဆောင်ရွက်နေသောBaşkentrayစီမံကိန်း၏နယ်ပယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည် Sincan မှ Yenikent သို့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှတဆင့်၊ တက္ကသိုလ်locatedရိယာတည်ရှိသည့်Akçaörenအထိနှင့်ထိုနေရာမှMülkköyüသို့တိုးချဲ့သည်။ 90 မိုင်အကွာအဝေးလိုင်းအရှည် 18.4 မိုင်အကွာအဝေးသည်ရထားလမ်းအရှည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဝန်လိုင်းနှင့်ခရီးသည်လိုင်းအကြားဘေးချင်းယှဉ်။ ပြေးသည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က 30 ကိုစတင်ခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားမှုများစတင်ခဲ့သည်။ တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ တင်ဒါကြာချိန်၏ကြာချိန်။ ထောက်ပံ့ကြေးများမလုံလောက်ပါက2ကိုယခုနှစ်မတိုင်မီပြီးစီးမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ခန့်မှန်းခြေကုန်ဆုံးချိန်သည်3သြဂုတ်လတွင်လေလံတင်မည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်စောစီးစွာလျစ်လျူရှုရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ဒေသတွင်းရှိပြည်သူလူထုအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုမက်ထရိုမီတာသက်သောင့်သက်သာရှိစေရမည်။ ကျနော်တို့အစောပိုင်းပြီးစီး၏အပေါ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်။ Erken
18.4 KILOMETER ထည့်သွင်းလိမ့်မည်
မြို့တော်ဝန် Ercan ကသူသည်ပြည်နယ်မီးရထားအထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်းအစမှဆက်သွယ်နေပါသည်။ ကျနော်တို့အာဏာပိုင်များနှင့်အချို့သောချို့ယွင်းချက်များ၏ပပျောက်ရေးအကြောင်းပြောနေတာ။3မှတ်တိုင်များအတွက်တောင်းဆိုမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည့်မှတ်တိုင်တစ်ခုမှာခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ခုကိုစက်မှုဇုန်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတတိယမှာAkçaörenခရိုင်ဖြစ်သည်။ 42 တစ်ထောင်သည်စနစ်ကျသောစက်မှုဇုန်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ 42 သည်လူထောင်နှင့်ချီအလုပ်လုပ်သောနေရာတွင်ရပ်တန့်ခြင်းကဲ့သို့သဘာဝမရှိနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်စက်မှုဇုန်ဖြစ်သောကြောင့်မြို့တော်သည်ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ Akçaörenရပ်ကွက်တွင်တက္ကသိုလ်areaရိယာတစ်ခုရှိသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်ရန်စဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ဒေသတွင်း၌ခရီးသည်မှတ်တိုင်တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောစက်မှုဇုန်အတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တိုင်များအကြောင်း၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရာရှိများနှင့်အတူမှတ်တိုင်များတည်ရှိရာနေရာကိုတိတိကျကျသေချာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းတွင်လက်ရှိမှတ်တိုင်များမှာKavunpazarıတည်ရှိပြီး Yenikent ဖြစ်ပြီး Gendarmerie လမ်းဆုံဖြစ်သည်။ ဒီမျဉ်းကို 18.4 မိုင်အကွာအဝေးမှာထပ်ထည့်မှာပါ။
သက်ဆိုင်ရာကျန်းဘူတာရုံအားဖြင့်ကျန်း-Kayaşခရီးသွားလက်မှတ်လိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ၏ယူနိုက်တက်ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများပြည်ထောင်စုပိတ်ပွဲ! 20 / 02 / 2012 SİNCANနှင့်KAYAŞတို့အကြားမြို့ပြရထားစီမံခန့်ခွဲမှုသည် 01.08.2011 နေ့စွဲ မှစ၍ Başkentrayစီမံကိန်းနှင့် Ankara Metropolitan မြူနီစီပယ်၏လုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုကိုးကားပြီးလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ SİNCANနှင့်KAYAŞအကြားရှိဤလွတ်လပ်သောသဘောထားနှင့်ခရီးဝေးရထားအားဆန္ဒပြခြင်း…
TCDD နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်း Sincan - တူရကီ - လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါများ၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်နယူးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုKayaşမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည် 04 / 04 / 2012 တူရကီနိုင်ငံရထားလမ်း၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TCDD) မှအကောင်အထည်ဖော်မည့် Sincan-Ankara-Kayaş-Line (Başkentray) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတင်ဒါနှင့်စပ်လျဉ်း။ တိုးတက်မှုအသစ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းအယ်လ်
TCDD နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်း Sincan - တူရကီ - လိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးKayaşဧပြီလ 25 2012 ရက်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပြီး 06 / 04 / 2012 တူရကီနိုင်ငံရထားလမ်း၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TCDD) မှအကောင်အထည်ဖော်မည့် Sincan-Ankara-Kayaş-Line (Başkentray) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတင်ဒါနှင့်စပ်လျဉ်း။ တိုးတက်မှုအသစ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းအယ်လ်
TCDD နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်း Sincan - တူရကီ - Kayaşဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါကမ်းလှမ်းမှုကိုဒလိုင်းများ၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးစုဆောင်းခဲ့ကြ 03 / 05 / 2012 T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek, “Sincan - Ankara - Kayaş Hattının Yeniden İnşa Edilmesi (Başkentray) Yapım İşi” ihalesinin teklifleri 25 Nisan 2012 tarihinde toplandı. Yatırımlar Dergisi'nin aldığı…
TCDD နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်း Sincan - တူရကီ - ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါများ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏ရလဒ်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ခွင့်ပြုချက်Kayaşလိုင်းတင်သွင်းခဲ့သည် 30 / 05 / 2012 တူရကီအစိုးရမီးရထား (TCDD) မှ 25 Aprilပြီလ 2012 တွင်စုဆောင်းခဲ့သည့်တင်ဒါခေါ်ယူမှု - Sincan - Ankara - Kayas Line (Başkentray) ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါများအတွက်တင်ဒါတင်ဒါကိုအကဲဖြတ်ခြင်း…
TCDD နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်း Sincan - တူရကီ - လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါများ၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်နယူးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုKayaşမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်
TCDD နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်း Sincan - တူရကီ - လိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးKayaşဧပြီလ 25 2012 ရက်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပြီး
TCDD နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်း Sincan - တူရကီ - Kayaşဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါကမ်းလှမ်းမှုကိုဒလိုင်းများ၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးစုဆောင်းခဲ့ကြ
TCDD နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်း Sincan - တူရကီ - ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါများ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏ရလဒ်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ခွင့်ပြုချက်Kayaşလိုင်းတင်သွင်းခဲ့သည်
TCDD နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်း Sincan - တူရကီ - မျဉ်းKayaş Inc ၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်Gülermakနု - Kolin ဆောက်လုပ်ရေးဖက်စပ်အနိုင်ရ
TCDD နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်း Porr Bau GmbH သည် Sincan - တူရကီ - Kayaşလိုင်းများ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် JCC များအတွက်တင်ဒါ၏ရလဒ်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ
TCDD နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်း Ozaras - İntekဖြစ်ပါသည် - လေးစားလိုက်နာဖွဲ့စည်းပုံကုမ္ပဏီတစ်ခုက Sincan - တူရကီ - Kayaşလိုင်းများ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် JCC များအတွက်တင်ဒါ၏ရလဒ်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ
နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်း Sincan - တူရကီ - လိုင်း၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတင်ဒါKayaşရလဒ်
နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်း Sincan - တူရကီ - Kayaşလိုင်းGülermakနေဆဲနု၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး - Kolin ဆောက်လုပ်ရေးဖက်စပ်အနိုင်ရ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (223) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)